वडा नम्बर ७ पोखरा महानगरापालिका भित्रका वडामा नमुना बन्ने दौडमा कस्सियो (भिडियो) « News24 : Premium News Channel
वडा नम्बर ७ पोखरा महानगरापालिका भित्रका वडामा नमुना बन्ने दौडमा कस्सियो (भिडियो)
१. देशका गाउँठाउँका प्राकृतिक विसौनी चौतारी मासिन थालेपछि पोखरा महानगरको भने ध्यान तानियो
चौतारोः आफैमा आनन्द लाग्ने प्राकृतिक आरामदायी विसौनी । चौतारो अर्थात चौतारी नेपाली समाजको संस्कार र परिचय नै हो । घाम लागेको बेलामा या हिडेर थोकेको समयमा सुस्ताउने चौतारोहरु पनि समयक्रमसंगै हराउन थाले । पहाडी जिल्लाहरुमा बर र पिपल रोपेर र माटोको घडामा पानी राखिदिएर वटुवाको प्यास र थकाई मेटने माध्यम थियो चौतारो । शहर बजारमा पनि ठाउँठाउँमा वर र पिपलको रुख रोपेर चौतारो बनाउने चलन थियो नै । तर सडक सञ्जालले धेरै गाउँठाउँहरुलाई जोड्दा चौतारोहरु वटुवा कुरेर बस्न विवश छन अहिले ।
शहर बजारमा बुढाबुढीहरुको बसिबियाँलो गर्ने र सुस्केराहरु हाल्ने चौतारो भेटिन पनि छोडिसके । तर होइन पोखरा महानगरपालिकाले चौतारोहरु मेटिन नदिने गरी यस्को अस्तित्व बचाउने अभियानमा लागेको छ । त्यसमाथि पनि पोखरा शहर भित्र बनाइन लागेको र संरक्षण गर्न लागिएको चौतारोलाई बुटिक चौतारो नाम दिइएको छ । स्मार्ट सिटी बन्ने प्रयासमा रहेको पोखरामा चौतारोमा हुन लागेको आधुनिकता र परम्पराको यो समिश्रण वास्तवमा नै पोखराको सुन्दरतामा थप कसी बन्ने निश्चित छ ।
२. वडा नम्बर ७ पोखरा महानगरापालिका भित्रका वडामा नमुना बन्ने दौडमा कस्सियो
वडा नम्बर ७ । पोखरा महानगरपालिकाको हेर्न लायक वडाकोरुपमा विकसित हुने प्रयासमा छ । महानगरीय स्तरीय १० र वडा स्तरीय २७ योजना गरी कुल ३७ योजना लिएर अघि बढिरहेको वडा नम्बर ७ मा देखिने गरी विकासका धेरै कामहरु हुन थालेको छ । आफ्नो वडालाई समृद्ध बनाउन वडावासीको पनि साथ र सहयोग रहेको वडा नम्बर ७ मा पहिला वडावासीको सुविधालाई नै लक्षित गरी धमाधम बिभिन्न कामहरु भइरहेका छन् ।
३.पोखराको मुटु मानिने वडा नम्बर ९ फोहर मुक्त र योगामय वडा बन्ने अभियानमा
वडा नम्बर ९ जस्लाई पोखराको मुटु भनेर चिनिन्छ । फोहर मुक्त वडा बन्ने अभियानमा होमिएको यो वडा भएर सेती नदी पनि बग्ने गर्छिन । वृक्षरोपणमा पनि उत्तिकै जोड दिइएको यस वडामा बिभिन्न ६ स्थानमा योगा सेन्टर समेत खोलिएको छ । वडाको लक्ष्य वडावासीलाई स्वस्थ्य बनाउने मात्र नभइ सिंगो वडालाई नै स्वस्थ्य बनाउने छ । त्यस्तै चौताराहरुको संरक्षणमा पनि वडामा त्यतिकै ध्यान पु¥याइएको छ भने वडालाई भ्रष्टाचार मुक्त बनाउने अभियान पनि चलाइएको छ ।